လေးတွန်းထိုးခြင်း၊ ဘလော့ရေးခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မေလ 17, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
အမေရိကန်ရေတပ်တွင်ရှိစဉ်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်များထဲမှတစ်ခုမှာလက်ခံရရှိသောသတင်းစကားကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးအတည်ပြုချက်ဖြင့်ပြန်လည်ရပ်တည်ခြင်းဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်သမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော့်တာဝန်တစ်ခုကတော့ Bow Thruster ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပဲ။ Bow Thruster သည်အခြေခံအားဖြင့်သင်္ဘော၏တစ်ဖက်မှသည်အခြားလေးသို့တင်သောဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအလယ်တွင်ပန်ကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Bow Thruster ၏လည်ပတ်နေသောလျှပ်စစ်မော်တာဖြစ်ပြီး၎င်းတွင်လည်ပတ်ရန် torque ပမာဏအရ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Generator ကိုအွန်လိုင်းတွင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
ငါကမ်းခြေသို့ပြေးဝင်ရန်နှင့်အဏ္ဏဝါတင့်ကားများနှင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုချပစ်ရန်ကြီးမားသောချဉ်းကပ်လမ်းတစ်ခုစတင်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သော Tank Landing သင်္ဘော (LST-1192) တွင်ကျွန်ုပ်ရှိနေသည်။ Bow Thruster သည်သင်္ဘော၏လေး (ရှေ့) ၏တည်နေရာကိုအပြည့်အ ၀ ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ သင်္ဘောကို Captain သည်အဓိကအင်ဂျင်များနှင့်ပေါင်းပြီးဂရုတစိုက်သွားလာရန်အသုံးပြုသည်။ တံတားပေါ်တွင်သင်္ဘော၏တည်နေရာ၊ အင်ဂျင်ထိန်းချုပ်မှု၊ စတီယာရင်စသည်တို့ကိုခြေရာခံသူများစွာရှိပါသည်။ ကပ္ပတိန်သည်hundredsရာမသင်္ဘောတစ်စင်းကိုညင်ညင်သာသာရွေ့လျားနိုင်ရန်ဂေါက်တလုံးဖြင့်ဂရုတစိုက်ဟန်ချက်ညီစွာချိန်ညှိနိုင်သည်။ က ဦး တည်ရာကဖို့အတားအဆီး။
ဗိုလ်ကြီးအပြည့်အဝသတိပြုမိစေရန်သူသည်မေးခွန်းတစ်ခုမေးလိမ့်မည်သို့မဟုတ်အမိန့်ကိုတားမြစ်လိမ့်မည်။ မေးခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းသည်သင်္ဘောကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သောသင်္ဘောသားထံမှအဖြေရလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ဗိုလ်ကြီးကထိုအဖြေကိုပြန်ပြောလိမ့်မည်။ သင်္ဘောသားကိုမှာယူတဲ့အခါမှာသင်္ဘောသားကအမိန့်ကိုပြန်လုပ်ပြီးအမိန့်ကိုပြန်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့သင်္ဘောသားကဒီအလုပ်ပြီးသွားပြီလို့ပြောပြီးဗိုလ်ကြီးကထပ်ခါတလဲလဲဝန်ခံလိမ့်မယ်။ ဤအရာအားလုံးကိုသင်္ဘောမှတ်တမ်းတွင်လည်းရေးသားခဲ့သည်။
ခေါင်းဆောင်: “ Bow Thruster၊ စွမ်းအင်၏ငါးပုံတစ်ပုံကိုကြယ်ပွင့်”
Bow Thruster တွင်ရှိနေသောသင်္ဘောသားသည်ညာဘက်သို့သွားသောလမ်း၏ ၅ ပုံတစ်ပုံကိုဖွင့်ပါ။
လေးပစ်ခတ်မှု “ Bow Thruster၊ စွမ်းအင်ကြယ်ငါးပုံတစ်ပုံ။
လေး Thruster အော်ပရေတာ လက်ကိုင်ကိုပဉ္စမနေရာမှ powerboard သို့ပြောင်းသည်။
လေးပစ်ခတ်မှု "ဗိုလ်ကြီး, လေးကိုတွန်းကန်အားစွမ်းအင်ကြယ်ပွင့်ငါးပုံတစ်ပုံဖြစ်သည်။ "
ခေါင်းဆောင်: Bow Thruster သည်ငါးပုံတစ်ပုံ၏ကြယ်ပွင့်ဖြစ်သည်။
ရုံဘူးသီးဖွင့်ဖို့တော်တော်ရှုပ်ထွေးညာဘက်? သို့သော်ထိုခလုတ်ကိုဖွင့်လိုက်ခြင်းသည်များစွာသောအဖြစ်အပျက်များဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တစ်ခုကိုဆွဲယူသွားသောဂျီနရေတာမှပမာဏများသောပမာဏသည်သာမန်အဖြစ်အပျက်များမှဖြစ်ပျက်လာခြင်းမှဘာမျှမဖြစ်စေရဟုစောင့်ကြည့်သောအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး ကအင်ဂျင်နန်နှင့် စွမ်းအင်နှင့်ဒီဇယ်စက်ရုံများအားလုံးကိုလေ့လာသည့်အင်ဂျင်နီယာချုပ်တစ် ဦး ကစောင့်ကြည့်နေသည်။ ရေတပ်အနေဖြင့်ဆက်သွယ်ရေးသည်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ထားသဖြင့်သတင်းစကားကိုထပ်မံအတည်ပြုခြင်းနှင့်သတင်းစကားကိုအတည်ပြုခြင်းသည်ထိုမက်ဆေ့ခ်ျတွင်သတင်းအချက်အလက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိကြောင်းသေချာစေသည်။
Puerto Rico တွင်တစ်ချိန်ကအငယ်တန်းအရာရှိတ ဦး သည်ပဲ့ကိုင်တွင်ရှိခဲ့ပြီး Bow Thruster ၏အခြေအနေကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ The Bow Thruster နှင့်သုံးပုံတစ်ပုံစွမ်းအားသက်သက်သာရှိကြောင်း၊ သင်္ဘောကျင်းဆီသို့ ဦး ညွှတ်နေကြောင်းသင်္ဘောသား (ငါ့ကို) ကထပ်မံပြောကြားခဲ့သည်။ Bow Thruster (တကယ်တော့ဒါကအမိန့်ကိုဖောက်ဖျက်ခြင်း) ကိုစတင်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခဲ့ကြောင်း (အလန့်တကြားအသံအရဖြင့်) ပြန်ပြောနေတယ်။ စန်း သင်္ဘောကဆိပ်ကိုကျောခိုင်းထွက်ခွာသွားပြီးလေးသည်ငါတို့နှင့်အတူဆိပ်တစ်ချောင်းကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်။ ကံကောင်းတာက၊ အဲဒါအများစုဟာသစ်သားမျှသာဖြစ်ပေမယ့်ဒေါ်လာထောင်ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေဆဲပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တစ် ဦး သည်သူ၏လက်အောက်ငယ်သား၏စကားကိုနားမထောင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာရှိအားတံတားပေါ်မှခေတ္တထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်ခါထပ်မံမောင်းနှင်ခွင့်မပြုတော့ပါ။
ငါအမေရိကန်ရေတပ်ကိုအလွန်ရိုသေလေးစားမှုရှိသည်။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းထက်အသိစိတ်ထဲကနေပြုမူတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကျွန်တော်တို့မရပ်မနားတူးခဲ့ဖူးတယ်။ ငါတို့သည်လည်းမရပ်မနားဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်တစ်ခါမှမပါဝင်ဖူးသောသူများသည်ဤဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းသည်အလဟ is ဖြစ်မည်ဟုထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ ငါအလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုများကိုကြည့်သောအခါ, ထိုပြissuesနာများ၏ 99% ကျနော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးအမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမဟုတ်ဘဲဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်သော။ ယူအက်စ်ရေတပ်သည်အဆင့်အတန်း၊ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းစနစ်များကိုထူထောင်ခဲ့သည်။ ဒီအကျင့်စရိုက်တွေကိုအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
ဤအရာအားလုံးသည် Blogging နှင့်မည်သို့သက်ဆိုင်သနည်း။
ထိုအ ... ဖြစ်ကောင်းသူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာဘလော့ဂ်၌တွေ့ကြသည်! ငါအခြားဘလော့ဂ်တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်ပါက၎င်းဘလော့ဂ်သည် trackback ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ထို blogger သည်ယခုပြန်လာပြီးကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်မှတ်ချက်များဖတ်သည်။ (နှင့်အပြန်အလှန်) အဆိုပါသတင်းစကားကိုထပ်ခါတလဲလဲ ... ကိုစေလွှတ်ခြင်းနှင့်အသိအမှတ်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် blogging သည်မယုံနိုင်စရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပြီးနောက်ခံနည်းပညာများကိုပင်မမီဒီယာနှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းများမှပင်စတင်သုံးစွဲလာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါဖတ်ပြီးကြောင်းငါသိ၏ Jonathon Schwartz ၏ဘလော့ဂ် သူပြောတာကသူကသူ့သတင်းစကားကိုကမ္ဘာကြီးဆီရောက်အောင်တင်ပေးရုံသာမကဘဲသူ့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုလည်းဒီသတင်းစကားကိုထုတ်ပေးပါတယ်
Captain သင်္ဘောလိုပဲကုမ္ပဏီတွေလည်ပတ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုငါပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ ယူအက်စ်ရေတပ်သည်အမြတ်အစွန်းရရန်သို့မဟုတ်ငွေစုဆောင်းရန်မလိုပါ။ ယူအက်စ်ရေတပ်၏တစ်ခုတည်းသောရည်မှန်းချက်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အန္တရာယ်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ဖြစ်သည်။
ငါတွေးမိတယ်၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ သူတို့သည်လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ရာထူးနှင့်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိသည့်အခါကုမ္ပဏီများမည်မျှအောင်မြင်ကြသည်။ အကယ်၍ လမ်းညွှန်ချက်ကိုရှင်းလင်းစွာအသိပေးခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များမည်မျှလွယ်ကူလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။ သူတို့အမိန့်ကိုလိုက်နာပြီးနောက်မှာသူတို့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုနားထောင်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းဆောင်ဘယ်လောက်များများပိုပြီးအောင်မြင်မှာလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။
ငါနည်းနည်းကုမ္ပဏီများမှမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် 'သို့ပြေး' ပြdidနာရှိရင်
ဒီ post ကိုအလုပ်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာမှမှုတ်သွင်းခဲ့တာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များသည်ယခုအပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာတွင်ထူးခြားသောသွင်ပြင်အချို့ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများထံမှထွက်ပေါ်လာနိုင်သည့်ပြissuesနာများကိုဆက်သွယ်ခြင်းနှင့် ဦး စားပေးသတ်မှတ်ခြင်း၊ “ စစ်ခန်း” တွင် ၄ ရက်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၌အမှားအယွင်းအနည်းငယ်ရှိခဲ့သော်လည်းရိုးရိုးသားသားပြောနိုင်သည်မှာအဓိကပြissuesနာများမှာ အားလုံး ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ပျက်ပြား။
မေလ 18, 2007 မှာ 1: 52 pm တွင်
Doug, ငါငါတို့ဝေးလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလူတွေကိုဆက်သွယ်ရေးတပ်မက်ကြောင်းပြောဖို့အထိသွားလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်ပျော့ပျောင်း။ ပျော့ပျောင်းသောကမ္ဘာကြီးတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသောဆက်သွယ်ရေးသည်ခက်ခဲနေပြီးလူသားများအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်ပြည့်စုံစေရန်ဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်သည်။ စီးပွားရေးတွင်အောင်မြင်မှုရရန်သာမကဘဲပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်ရန်အတွက်လည်းအောင်မြင်ရန်ဖြစ်သည်။ လူသားများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်စေခဲ့သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်ကြိုးစားပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့မှမက်ဆေ့ခ်ျများရှင်းရှင်းလင်းလင်းလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးထိုဆက်သွယ်မှုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းအတည်ပြုပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ပညာရှင်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်များစွာသောသူများအတွက်အချိန်ဖြုန်းတီးဟန်ရှိသည်ဟုထင်ရဖွယ်ရှိသည်၊ သို့သော်မက်ဆေ့ခ်ျကို (က) ရှင်းလင်းစွာဆက်သွယ်ခြင်း၊ (ခ) စနစ်တကျရရှိခြင်းသို့မဟုတ် (ဂ) မဖြစ်ခဲ့သည့်ခ / ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်လမ်းပေါ်တွင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းထက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ် ပို၍ နှစ်သက်သည်။ နှစ်ခုလုံး။ အပြင် "ကောင်းသောခံစားမှု" ပစ္စည်းပစ္စယများအပြင်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောစီးပွားရေးဆိုင်ရာအဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းရရှိစေသည်။ ကောင်းသော post!
မေလ 18, 2007 မှာ 2: 08 pm တွင်
ငါတို့ဒီနေ့ပဲစာအုပ်ကလပ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပြီးစကားစမြည်ပြောရင်းတွေအများကြီးကိုဆက်သွယ်ပြီးအရာအားလုံးကိုဆက်သွယ်သည်။ ငါတို့၏ဒုက္ခများသည်ဆက်သွယ်ရေးညံ့ဖျင်းခြင်းမှတကယ်တမ်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းလား။ ပြီးတော့ 'no' ဆက်သွယ်ရေး၏ဝမ်းနည်းဖွယ်ရလဒ်များကိုကျိန်းသေတွေ့မြင်ရပါတယ်၊ အဲဒါကဗာဂျီးနီးယားနည်းပညာကုမ္ပဏီလူသတ်သမားလိုမျိုးမိကျောင်းတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာပါ။
ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, Jules! မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်အသစ်
27:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 09
မင်းကဒီ entry ကိုငါ့ကို Titanic သတိပေး, သင်သိသလော :)) တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် .. ဒါကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အထူးတစ်ခုခုရှိတယ်။